Paul Pogba iyo Amad Diallo oo taageero u muujiyay Falastiiniyiinta - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Paul Pogba iyo Amad Diallo oo taageero u muujiyay Falastiiniyiinta
Waxaa aad loo hadal hayaa labo ciyartooy oo ka tirsan kooxda ka dhisan Ingiriiska ee Manchester United oo calanka Falastiin kusoo bandhigay garoonka kooxdaas ee Old Trafford kadib xaley 1-1 ay kusoo idlaatay ciyaar kala dhexeeysay kooxda Fulham.
Paul Pogba iyo Amad Diallo ayaa la arkayay iyago lulaya calanka Falastiin xilli ay ku sugnaayeen garoonka, waxay tageero u muujinayeen Falastiin.
Waxay u muuqdeen in taageerayaasha kooxda ay u dhiibeen calanka Falastiin.
Maamulaha kooxda Manchester Ole Gunnar Solskjaer ayaa difaacay ciyartoydiisa taageerada u muujiyay Falastiin isla markaana sheegay in kooxda ay qaddarineyso fikirka qofka.
Previous articleQarax ka dhacay Magaalada Jowhar & khasaaro ka dhashay
Next articleMadaxweynaha Falastiin oo hanjabaad u jeediyay Israa’iil